Izindaba - I-Valve Seal Valve
EZIPHUMA ZENKONZO YOKUSEBENZA
Ngokwesici sokulungiswa, kuyiqiniso ukuthi lolu hlobo lwe-valve lubalwa ngaphansi kwanoma yiluphi olunye uhlobo, kepha i-valve inezinzuzo ezithile ezibalulekile ngokulandelayo:
Impilo esebenzisekayo iqinisekisiwe.
Kukhona ingono yamafutha kuwo wonke ama-valve esango lesango lokufaka ngaphansi kokukhiqizwa kwamanje ukuqinisekisa ukuthambisa okulungile phezu kwejoka lehlathi.
Imicu esesiqu kuzo zonke izinhlobo zevalve seal seal kufanele igcinwe ihlanzekile uma kungenzeka futhi igcotshwe ngezikhathi ezithile ngegrisi ephezulu yokushisa.
Kunconywa ukuthi isondlo sokuvikela kufanele senziwe okungenani njalo ezinyangeni ezintathu.
Ukugcinwa kubaluleke kakhulu lapho i-valve isetshenziselwe ukufakwa kokushisa okuphezulu uma kwenzeka kubalulekile ukusebenzisa i-grease yohlobo lokushisa okuphezulu.
Ngalesi sikhathi, kuyinto efiselekayo ukuthi i-valve iqhutshwe kusuka ekuvulekeni kuya ekuvaleni, futhi okuphambene nalokho.
Njengomhlahlandlela ojwayelekile wokukhethwa kwe-valve efanele isicelo esithile, i-valve yesango kufanele isetshenziselwe ikakhulukazi umusi wokucindezela ophansi noma ophakathi, imigqa yokulandela umusi, noma ezinye izinsizakalo ezinjengokudlulisa ukushisa. I-valve yomhlaba kufanele ikhethelwe umusi ophakathi noma ophakeme we-steam, lapho ukuhlukaniswa kwemikhumbi kungabandakanyeka enkingeni yokuphepha. Ibuye isetshenziselwe ukuphatha imidiya enobuthi noma yokuqhuma futhi kuzo zonke izimo lapho kungenzeka khona inkinga ekulawulweni kokugeleza.
Kumele kuqashelwe ukuthi sine-valve eklanywe ngokukhethekile lapho ukweqa okomile kugesi noma uketshezi kuvinjelwe ngokuphelele. Ku-valve, ukupakisha okujwayelekile kwesiqu kufakwa ulwelwesi lwensimbi oluguquguqukayo lapho zonke izindlela ezivuzayo ezingaba khona ngokuhlangana kwesiqu noma komzimba / kwebhonethi kufakwa ama-welding.
Amayunithi we-bellows asetshenziswe kule valve ahlolelwa umjikelezo wempilo kuya ekubhujisweni, okuholele ekutholeni imiphumela yokuhlolwa egculisayo ehlangabezana nesikhathi sezimpilo, izinga lokushisa nezingcindezi ze-ASME B16.34.
Engagqwali Ball Valve, Bronze Ibhola Valve, Inhlanzeko Engagqwali Ball Amaphayiphu, Bronze Ball Valve Nge Ptfe Izihlalo, Engagqwali Ball Amaphayiphu, Ingxubevange Steel Ball Amaphayiphu,